बाढीले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन स्थानान्तरण र पुनर्निर्माण «
बाढीले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन स्थानान्तरण र पुनर्निर्माण
प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७७, सोमबार ०९:०४
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ घ्याँसीखर्कस्थित रितुङ माध्यमिक विद्यालयको भवन स्थानान्तरण भएको छ । रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त विद्यालयको भवन स्थानान्तरण गरेर पुनर्निर्माण गरिएको हो । नदीको दायाँ किनारमा रहेको विद्यालय भवन बाढीले कटान गरेपछि घ्याँसीखर्कस्थित बायाँ किनारको नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको प्रधानाध्यापक खिमबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो ।
विसं २०७५ भदौ २७ गते रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढीले कटान गरेर रितुङ माविको आठ कोठे भवन बगाएको थियो । नदी कटानका कारण करिब छ रोपनी जग्गा बगाउनुका साथै थप जोखिम भएकाले भवन स्थानान्तरण गरिएको प्रअ छन्त्यालले बताउनुभयो । “नयाँ ठाउँमा जग्गा किनेर भवन पुनर्निर्माण गरेका हौँ”, प्रअ छन्त्यालले भन्नुभयो, “पहिलेको ठाउँमा जग्गा अभाव र थप जोखिम भएकाले स्थानान्तरण गर्नुपरेको हो ।” विद्यालय स्थानान्तरणका लागि नौ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ । आन्तरिक स्रोत जुटाएर प्रतिरोपनी रु दुई लाख ५० हजारका दरले जग्गा खरिद गरिएको वडाध्यक्ष समेत रहनुभएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गमान छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो ।
सोही जग्गामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र गाउँपालिकाको सहयोगमा तीन वटा दुई तले १२ कोठे भवन निर्माण भएको छ । प्राधिकरणको रु एक करोड ४० लाख अनुदानमा चार÷चार कोठे दुई वटा भवन निर्माण भएको छ । अर्को चार कोठे भवन निर्माणका लागि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रु. ३० लाख र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु. १६ लाख अनुदान सहयोग गरेको थियो । प्रवासमा रहेका कुइनेमङ्गलेबासीहरुले जुटाएर पठाएको रु. नौ लाख लागतमा कार्यालय प्रयोजनका लागि एक तले भवन निर्माण भएको छ ।
भवनका साथै छात्रामैत्री शौचालयसमेत निर्माण भएको छ । नयाँ भवन निर्माण भएको ठाउँमा नदी कटान नियन्त्रण, घेराबार र सुरक्षित खानेपानी योजनाको माग गरिएको अध्यक्ष छन्त्यालले बताउनुभयो । कक्षा १० सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयमा ११५ विद्यार्थी छन् । भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित सो विद्यालयका तीन शिक्षकलाई निजी स्रोतबाट तलब व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।रासस